Amandla angaba khona: kuyini, izinhlobo, izici nokuguqulwa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ku-physics nakugesi esikhuluma ngakho amandla angaba khona. Ingenye yezinhlobo ezimbili zamandla amakhulu futhi yiyona enesibopho sokugcina into futhi encike esimweni sayo maqondana nezinye izinto. Futhi kuya ngobukhona benkambu yamandla ngaphakathi kwayo nezinye izinto. Amandla angaba khona asetshenziswa kakhulu emkhakheni we-physics kanye nogesi.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngakho.
1 Izinhlobo eziyinhloko zamandla
2 Izibonelo zamandla angaba khona
3 Izinhlobo zamandla angaba khona
4 Ugesi nokunwebeka
Izinhlobo eziyinhloko zamandla
Yize konke lokhu kubonakala kunzima kakhulu ukukuqonda, ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo zamandla ezikhona.
Amandla we-Kinetic: kuyinto ehambisanayo ehambayo. Isibonelo, izindwani zensimbi enomoya zinamandla e-kinetic lapho kuvunguza umoya. Iyakwazi ukuguqulwa ibe ugesi uma izosetshenziswa.
Amandla angaba khona: Yinye egcinwe ukunqoba isikhundla sayo maqondana nezinye izinto. Isibonelo, ibhola elime lide linamandla aphakeme kakhulu maqondana nezinga lomhlabathi.
Sizobona ukuthi into ingaba kanjani namandla ngalezi zindlela ezimbili. Ukuze senze lokhu, ake sicabange nge-cannonball. Lapho i-cannonball ingakaqedi, wonke amandla anawo asesimweni samandla angaba khona. Inani lale mandla lincike ezintweni ezithile njengesikhundla maqondana nezinye izinto. Lapho idutshulwa, wonke la mandla aba yinoni ngoba umgqomo uphuma ngejubane elikhulu. I-projectile igcina inani elikhulu lamandla we-kinetic kepha ingaphansi kwamandla. Njengoba unciphisa ijubane, banamandla amancane we-kinetic futhi lapho bema ngokuphelele, babuyela emandleni.
Izibonelo zamandla angaba khona
Ukuze sikuqonde kahle konke lokhu, sizonikeza ezinye zezibonelo. Ake sicabange ngamabhola asetshenziselwa ukudiliza izakhiwo. Lapho ibhola limiswe ngokuphelele futhi lingasetshenziswa, linamandla agciniwe. La mandla avela lapho ekhona maqondana nezinye izinto. Lapho ibhola liqala ukunyakaza, lihamba njenge-pendulum ukushaya ingxenye yesakhiwo esizobhidlizwa. Kukusenzo sokunyakaza lapho ibhola liqala ukuba namandla ka-kinetic. Lapho inyakaza futhi ishaya udonga futhi inamandla angaba namandla amancane ne-kinetic energy.
Njengoba sihamba ukuphakamisa ibhola ekuphakameni sigcina amandla amaningi ngokwengeziwe. Lokhu kungenxa yokuthi amandla adonsela phansi oMhlaba aheha ibhola ngamandla amakhulu njengoba ephakeme. Ngakho-ke, uma i-cannonball imisiwe ekuphakameni kwezindaba ezintathu, izoba namandla amaningi kakhulu kunaleyo engamasentimitha amathathu ukuphakama. Konke lokhu kulula ukukubona unikezwe imiphumela abanayo lapho ilahlwa ngasikhathi sinye. Lesi yisizathu esenza kuthiwe inani lamandla ento engaba namandla ancike esimweni sayo noma emandleni atholakala ngamandla adonsela phansi kuyo.
Izinhlobo zamandla angaba khona
Siyazi ukuthi into ingagcina lolu hlobo lwamandla futhi ingaguqulwa ibe ezinye izinhlobo kuya ngokuthi kwenzekani ngokulandelayo. Ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene ezikhona:
Amandla adonsela phansi amandla: Yiyo enento ngenxa yokuheha umhlaba. Ukuphakama kwakho, kuningi onakho. Akuyona yodwa, ngoba amandla adonsela phansi angasebenzisana nenye into enkulu.
Amandla wamandla wamakhemikhali: Yiyo enento egcinwe ngokwendlela ama-athomu nama-molecule ahlelwe ngayo. Siyazi ukuthi ama-athomu nama-molecule angahleleka ngokuhlukile ngokuya ngesimo sento uqobo lwayo. Kuya futhi ngokwakhiwa kwayo. Ama-molecule anezibopho ezithile zamakhemikhali futhi angadala noma angahle abangele ukusabela. Isibonelo, lapho sidla siguqula ukudla kube ngamandla wamakhemikhali kanti okunye ukudla kuzokhiqiza amakhalori amaningi kunokunye. Okufanayo kwenzeka ngamafutha afana no-oyela, okwazi ukugcina inani elikhulu lamandla angaba namandla ukuwaguqula kamuva abe ugesi nokushisa.
Amandla kagesi angaba khona: Kuyinto eyodwa enento kuye ngokukhokhiswa kukagesi. Kungaba i-electrostatic noma i-magnetic. Imoto ingagcina amandla athile kagesi futhi bekungukukhishwa okuncane lapho kuthintwa.
Amandla amandla enyukliya: Yilokho okusezinhlakeni ze-nucleus ye-athomu. Zixhunywe ngamandla enuzi futhi uma siphula lezi zinyunyana sibanga ukuhlangana kwenuzi futhi senza amandla amakhulu. La mandla siwathola ezintweni ezinemisebe enjenge-uranium ne-plutonium.
Kukhona nohlobo lwamandla okunwebeka okungenzeka ahlobene nempahla kagesi yendaba. Ukuqina kuya ngokuthambekela ekubuyiseleni isimo sokuqala somzimba ngemuva kokubekwa emandleni okhubazeka. Le mikhosi kumele ibe mikhulu kunokumelana kwakho. Isibonelo samandla okunwebeka yileso sentwasahlobo lapho yelulwa. Lapho ubuyela endaweni yawo yokuqala, lo mbutho awusasetshenziswa.
Isibonelo esicacile samandla okunwebeka kwamandla ngumnsalo nomcibisholo. Amandla okunwebeka afinyelela inani eliphakeme njengoba i-arc icatshangwa ngenkathi idonsa i-fiber nokunwebeka. Lokhu kuxabana kwenza ukuthi ukhuni luguqe kancane kepha alikho ijubane, ngakho-ke awekho amandla e-kinetic. Lapho sidedela intambo futhi umcibisholo uqala ukudubula, amandla okunwebeka aguqulwa abe amandla e-kinetic.
Njengoba sazi, nakugesi sisebenzisa lo mqondo. Futhi ingaguqulwa ibe ezinye izinhlobo zamandla njenge-kinetic, ukukhanya, ukushisa, njll. Onke la mathuba avela njengomphumela wokuguquguquka kwamandla kagesi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana namandla angaba khona, izici zawo nokuthi isebenza kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Yini amandla angaba khona